KMF/Cnoe: “Tsy misy korontana izany eo… ” | NewsMada
KMF/Cnoe: “Tsy misy korontana izany eo… ”
Hanao ahoana ihany ny ho tohin’ny toe-draharaham-pirenena amin’izao? Tsy misy korontana eo, raha ny fijerin’ny KMF/ Cnoe.
“Mahita isika fa tsy misy korontana io, fa vono vorona no betsaka… Tsy maintsy mba mametraka ny maha izy azy koa ny tsirairay. Mampitandrina izay mety handresy ny resy hoe: mbola olombelona, fa tsy hoe tsy misy dikany. Tsy maintsy manao izay fihetsika, samihafa ireny izy… Ny olom-pirenena rehetra fotsiny no mila tony.”
Io ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe, Andriamalazaray Andoniaina, manolona ny fanahiana korontana amin’ny fiandrasana ny voka-pifidianana. Antenaina hoe ho vitan’ny rehetra izay fitoniana izay. Satria vitany tamin’ny fiatrehana ny fampielezan-kevitra sy fifidianana ary ny fiandrasana ny voka-pifidianana fihodinana voalohany izany. Teo koa ny fiatrehana ny fampielezan-kevitra sy ny fifidianana fihodinana faharoa.
“Inona no hahasakana azy tsy hahavita ho tony intsony amin’ny fiandrasana ny voka-pifidianana havoakan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) amin’izao fihodinana faharoa izao?”, hoy izy. Antenaina koa fa ho filohan’ny Repoblika ho an’i Madagasikara izay voafidy eo: tsy inoana hoe andeha hanao didiko fe lehibe, na hanao valifaty na hanindry. Antenaina hahitana fitoniana sy fahombiazana ho an’ny rehetra izay toetra izay.
Mampalahelo ny fihenan’ny taham-pahavitrihan’ny mpifidy
Tena mampalahelo ny fihenan’ny taham-pahavitrihan’ny mpifidy tamin’ny fihodinana faharoa. Manontany tena ny ny KMF/Cnoe: inona no tsy nety tamin’ny fanentanana? Misy lesoka tao, matoa ambany be ny fahavitrihan’ny olom-pirenena tamin’ny fifidianana. Ambany no ho ny tamin’ny fihodinana voalohany izany: mila fandinihana lalina. Mety misy avy amin’ny Ceni, ny mpanao politika, ny kandidà…
Mila alamina ny lalàna mifehy ny fifidianana
“Mila alamina ny lalàna mifehy ny fifidianana amin’ny fanatsarana ny fifidianana: mety amintsika sy mendrika antsika ve?”, hoy ihany izy. Miankina amin’ny solombavambahoaka io. Raha sendra solombavambahoaka mendrika, mahazo lalàna mendrika antsika.
Solombavambahoaka no nanao an’io lalàna mifehy ny fifidianana amin’izao fotoana izao io. Na eo aza ny loholona, tsy nanan-danja loatra ny heviny. Na nanda aza ny loholona, tsy maintsy miverina any amin’ny Antenimierampirenena hatrany. Nefa nanaiky an’io lalàna io ry zareo loholona.